ktmkhabar.com - पैसा र पदको दम्भ मान्छेको पहिचान हैन, व्यवहार र बोली बचन सहितको मेहनतले मान्छे सफल बन्न सक्छ
भ्रष्ट भएर प्रस्ट नबोली जीवन बाच्नु के बाच्नु भ्रष्ट नभई प्रस्ट बोलेर जीवन बाच्नु पो बाच्नु हो
केही लेख्न मन छ,तर समाजले सधैँ पैसा कमाउनेलाई मात्र अब्बल ठान्छ, साथी भाइले पनि त्यही त हो पैसा पद प्रतिष्ठा पावर लाई ठुलो ठान्छन् । ईमान्दारी र सरल बोली बचनलाई लामो समय सँगै काम गरेका आफ्नै साथीहरूले त गन्दैनन् अरूको के कुरा गर्नु बहिनी, एक सरकारी कामबाट अवकाश प्राप्त अङ्कलको गुनासो हो यो ।
अवकाश प्राप्त जीवनपछि पनि प्रईभेटी जागिर गर्दै छु । म राम्रै पढ लेख मान्छे हुँ, त्यो जमानामा बिकम पास गरेर जागिर तिर लागेको हुँ । साथीहरू चाकडी चाप्लुसी गर्दै माथिल्लो पोस्टमा पुगे पैसा पनि मनग्गे कमाए तर ईमान्दारीता कमाउन सकेनन् । तिनीहरूले गलत तरिकाले कमाएको पैसाले अहिले उनीहरूलाई पोल्दै छ कहिले अख्तियारको चिठी कहिले अदालतको हाजिरी ।
पैसा कमाए झलक्क हेर्दा म सँगै जागिर गरेकाहरूको महल थियो गाडी थियो के थिएन तर अहिले दिनदिनै तनाव मात्र छ । लुकेर जिन्दगी बिताउँछन् । मुस्कुराउँदै ती अङ्कल भन्नु हुन्छ उनीहरू भन्दा म कयौँ गुणा सफल हुँ । पेन्सन आउँछ खानलाई पुग्छ । गलत गरिएन अदालत र अख्तियारले छोएन शत्रु कमाइएन गृहस्थी जीवनमा यो भन्दा ठुलो सफलता के हुन्छ र ?
उहाँ मुस्कुराउँदै भन्नु हुन्छ, मैले चाकडी पनि गरिन पैसातिर लागेर मनलाग्दी पनि गरिन त्यसैले जिवन रहुन्जेल इमानदारि काममा लागे मैले पैसा कमाइन तर इमान कुनै पैसावालाको भन्दा कम छैन । त्यसैले म यो साठीको वसन्त पार गर्दै गर्दा सफल जीवन बाचेजस्तो लाग्छ ।
भ्रष्ट भएर प्रस्ट नबोली जीवन बाच्नु के बाच्नु भ्रष्ट नभई प्रस्ट बोलेर जीवन बाच्नु पो बाच्नु हो । सरकारी जागिरबाट अवकाश प्राप्त एक जना परिचित अङ्कलले भनेको कुरा मैले प्रस्तुत गरेकी हुँ । बडो घत लाग्दो छ कुरा ।
उहाँलाई मनमा पथ भ्रष्ट कर्मचारीले गरेको अमानवीय व्यवहार खट्किएको रहेछ । तर कसलाई सुनाउने उनको आवाज त्यसै त्यसै अड्किएको रहेछ । इमानदारी काम गरेर माथिल्लो पदमा नपुगे पनि मैले सफल जीवन बिताए बैनी भनेको सुन्दा मलाई ती अङ्कल प्रति बडो सम्मान जाग्यो ।
मैले उनीसँग कुरा गर्दा सत्य र इमानदारी मान्छे नै सफल हुन्छन् भन्ने बुझे तर मलाई कसरी सफल भइन्छ भन्ने बुझ्नु थियो त्यो कुरा सबै पाउन सकिन । अनि सरासर घर फर्के केही सफल व्यक्तिहरूको जीवनी गुगलमा सर्च गरेकी छु र यो लेखनीमा तिनै सफल व्यक्तिहरूलाई भरेकी छु ।
सुरुमै निचोडमा पुगेकी छु परिश्रम र धैर्यता विना कुनै मान्छे सफल हुँदैन त्यसमाथि इमानदारी र सरल सबैले मन पराउने व्यवहार गर्ने हो भने मान्छे साँच्चै मान्छे बन्छ ।
एक जना पत्रकारले विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आईन्सटाईनलाई सोधे तपाईँको सफलताको रहस्य के ? आईन्सटाईनले मुस्कुराउदै दुई शब्दमा जवाफ दिए परिश्रम अनि धैर्यता ।
आईन्सटाईनको जीवन नियालेर हेर्दा जीवको सुरुवाती दिनहरू अति नै नराम्रा थिए । स्कुललाई जेल जस्तै सम्झने उनलाई टिचर तथा साथीहरूले मन्द बुद्धी उपनाम दिएका थिए ।
यस्तो उपनाम पाएका उनी विश्व प्रसिद्ध होलान् भनेर कसैले सोच्ने कुरै भएन अझ गणित शिक्षकले त आईन्सटाईनलाई सात जन्ममा पनि गणित सिक्न नसक्ने भविष्यवाणी गरेका थिए ।
अब सोचौ त यस्तो मान्छे कसरी विश्व प्रसिद्ध हुन्छ ? तर उनको निरन्तर परिश्रम र धैर्यताको अगाडि सबै फिक्का साबित भए । मेहनत र धैर्यताको कारण त्यस्तो मन्द बुद्धि भएको भनिएका बालक १२ बर्से उमेरमा युग्लिडको ज्यामिति र १६ बर्से उमेर सम्म ईन्टिग्रेट क्याल्कुलसको ज्ञाता भइसकेका थिए ।
अझ यो भन्दा बढी मेहनतका कारण सन १९०५ मा फोटो ईलेक्टो ईफेक्ट, प्रतिपादन गरेबापत भौतिक विज्ञानमा नोबेल पुरस्कार पाएका थिए । उनले प्रतिपादन गरेको सापेक्षतावादको (The Theory of relativity ) सिद्धान्त ले संसारमै तहल्का मच्चायो ।
यस्तो मन्द भनिएको मान्छे,विश्वविख्यात भयो । अब हरेक बुवा आमाले सोच्न जरुरी छ कि, ईक्जाममा नम्बर थोरै ल्याएर अथवा युनिभर्सिटी टप नगर्दैमा मान्छे बिग्रने हैन । हरेक व्यक्तिले क्षमता जन्मँदै लिएर आएको हुन्छ । क्षमता विहीन मान्छे धर्तीमा भेटिँदैन तर उचित ठाउँमा उचित क्षमता देखाउन नसक्दा मात्र मान्छे पछि परेको हो । तर नपढेर अङ्क कम ल्याउँदैमा मान्छेलाई यसको अस्तित्व संसारमा छैन भनेर भन्न मिल्दैन मात्र हैन मिल्दै मिल्दैन ।
अर्का विश्वविख्यात आविष्कारक थोमस एल्बा उडिसनले पनि आफ्नो औपचारिक शिक्षा पुरा गर्न सकेनन् तर मेहनत र स्वध्यानबाट १०९३ वटा आविष्कार गरी सबैभन्दा धेरै आविष्कार गर्ने आविष्कारकको रूपमा चिनिन पुगे ।
१२ बर्से सानै उमेरमा रेलवे स्टेसनमा पत्रिका बेचेर भोक मेटाउन बाध्य उनी मेहनतका कारण पत्रीकाको समेत सम्पादक भएका थिए । गरिबीले उनको लक्षलाई रोकेन उनले रेलको डिब्बालाईनै आफ्नो प्रयोगशाला बनाए । भनिन्थ्यो उनी यती धेरै मेहनत गर्दथे आफ्नु नाम समेत बिर्सिन्थे । ईलेक्टीक ल्याम्प बनाउँदा उनी ९९९ पटक असफल भएको तर मेहनत र धैर्यतालाई नछोडेका कारण उनी हजारौँ पटकमा सफल भएका थिए र सन १९७३ म यही ल्याम्पबापत नोबेल पुरस्कार समेत पाएका थिए ।
त्यसै गरि अर्की वैज्ञानिक म्याडम म्यारी क्युरी पनि मेहनत र धैर्यताको कारण सफल व्यक्तित्वमा गनिन्छिन् । महिला भएकै कारण पोल्यण्डमा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित उनी उच्च शिक्षाका लागी बिदेसिएकी थिइन । तर गरिबीले डेरा जमाएको थियो उनको जीवनमा । खान सम्म कठिन हुँदाहुँदै पनि मेहनतका कारण सन १९०३ मा Radio activity मा अनुसन्धान गरेबापत नोबेल पुरस्कार जितिन । बिचमै उनका पतिको मृत्यु भयो तर लगावलाई निरन्तरता दिँदै गइन । फेरि सन १९११ मा Radium and polonium पत्ता लगाएबापत रसायन शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार जितिन । यसरी कठिन परिस्थितिमा पनि मेहनत नछोडेका कारण २ बिदामा नोबेल पुरस्कार जितिन ।
अरू प्रशस्तै उदाहरण भन्न सकिन्छ,अमेरिकाका जर्ज वासिङ्टन,अब्राहम लिकंन,फ्रान्सका नेपोलियन बोनापार्ट जस्ता व्यक्तिहरू पनि मेहनतकै कारण सफलता चुमेका हुन । यस्तै पेले,म्यरोडोना,मेसी,रोनल्डो जस्ता खेलाडी जहा छन् सबै मेहनत रधैर्यतको कारण नै शिखर चुमेका छन् । त्यस्तै विलियम सेक्सपियर,रवीन्द्रनाथ टैगोर,लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्ता प्रसिद्ध लेखक हरु पनि मेहनतकै कारण शिखरमा पुगेका हुन । माइक्रोसफ्ट कम्पनीका मालिक बिल गेट्स पहिले कलेजबाट आउट भए तर मेहनत र धैर्यता गुमाएनन् लगातार धनिक पहिलो दोस्रो नम्बर मा पर्न सफल छन् ।
यसरी संसारका जति पनि चर्चित वैज्ञानिक,व्यापारी,कलाकार,साहित्यकार,खेलाडीहरू को उदाहरण प्रस्तुत गरेपछि एउटा कुरा स्पष्ट भन्न सकिन्छ यिनीहरू सबै जीवनको सुरुमा कमजोर छन् अभावमा छन् । तर कडा परिश्रम मेहनत र धैर्यताका कारण शिखर चुमेका छन् । त्यसैले यस्ता सफल व्यक्तिबाट सफलताको रहस्य सिक्न जरुरी छ ।
हाम्रोमा चलन छ स्कुलमा राम्रो अङ्क ल्याएन भने मान्छे खतम भयो तर त्यसरी मान्छे खतम भयो भन्न काहा पाइन्छ र ? मन्द बुद्धि भनिएकाहरू विश्व प्रसिद्ध हुन्छन् भने तपाई हामी मन्द बुद्धिका पनि हैनौ, त्यसैले हरेक विद्यार्थी र हरेक मान्छेलाई उसको पढाई र नेचरले सफल र असफल भन्न सकिँदैन ।
औपचारिक शिक्षा लिँदै नलिएकाहरू पनि सफल हुन सक्छन्,धुरन्धर पढेकाहरू पनि असफलतामा लटपटिएका हुन सक्छन । त्यसैले मेहनत र धैर्यतामा विश्वास राख्दा जीवन सफल हुन्छ भन्ने कुरा यथार्थ हो ।
यो सत्य हो मेहनत र परिश्रमले मान्छे बदलिन्छ । नपत्याउने खोलाले बगाउँछ । जान्दै नजान्ने भनेर हेप्न खोजिएका हरू आफूलाई म पो जान्ने हुँ भन्ने भन्दा धेरै जान्ने हुन सक्छन् । त्यसैले मान्छेलाई कमसेकम मान्छेको व्यवहार गर्नु पर्छ । घर अफिस समाज अहिले पैसा र पावरको दम्भले अन्धो बन्दै छ यो गलत हो ।
मान्छे मान्छे जस्तै बन्नु पर्छ । सानालाई माया र ठुलालाई आदर गर्ने बानी हुनु पर्छ । डोमिनेट गरेर मान्छेको अस्तित्वमा प्रश्न उठाउनेहरू मान्छे हैनन् जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसैले मान्छे बनेर बाचौँ मेहनत गरेर काम गरौँ सफलताले आफै पछ्याउँछ । मेरो बिचारमा पैसा र पदको दम्भ मान्छेको पहिचान हैन, व्यवहार र बोली बचन सहितको मेहनतले मान्छे सफल बन्न सक्छ ।